प्रकाशकहरू: Paywalls Need to Die। त्यहाँ मुद्रीकरण गर्ने राम्रो तरिका छ | Martech Zone
Paywalls डिजिटल प्रकाशनमा सामान्य भएको छ, तर तिनीहरू प्रभावकारी छैनन् र स्वतन्त्र प्रेसमा बाधा सिर्जना गर्छन्। यसको सट्टा, प्रकाशकहरूले नयाँ च्यानलहरू मुद्रीकरण गर्न र उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूले चाहेको सामग्री सित्तैमा दिनको लागि विज्ञापन प्रयोग गर्नुपर्छ।
९० को दशकमा, जब प्रकाशकहरूले आफ्नो सामग्री अनलाइन सार्न थाले, त्यहाँ रणनीतिहरूको दायरा देखा पर्‍यो: केहीका लागि मात्र प्रमुख शीर्षकहरू, अरूका लागि सम्पूर्ण संस्करणहरू। तिनीहरूले वेब उपस्थिति निर्माण गर्दा, डिजिटल-मात्र वा डिजिटल-पहिलो प्रकाशनहरूको पूर्ण रूपमा नयाँ विधा देखा पर्‍यो, जसले सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न डिजिटलमा सबै-इन जान बाध्य तुल्यायो। अब, उद्योगका दिग्गजहरूका लागि पनि, प्रिन्ट संस्करणहरू तिनीहरूको पूर्ण-स्तरीय डिजिटल उपस्थितिको लागि लगभग दोस्रो फिडल भएको छ।
तर विगत ३० वर्षमा डिजिटल प्रकाशनको विकास भएको भए पनि, एउटा कुरा भने झन्झटिलो चुनौती बनेको छ—मुद्रीकरण। प्रकाशकहरूले विभिन्न विधिहरू प्रयास गरेका छन्, तर एउटा निरन्तर रूपमा विश्वव्यापी रूपमा प्रभावहीन साबित भएको छ: paywalls।
आज, सामग्रीको लागि चार्ज गर्न जोड दिने प्रकाशकहरूले संसारभर मिडिया खपत कसरी परिवर्तन भएको छ भनेर पूर्ण रूपमा गलत बुझेका छन्। अब, धेरै विकल्पहरू सहित, स्ट्रिमिङ भिडियो सहित जुन कसैलाई धेरै आकर्षक लाग्दछ, सम्पूर्ण मिडिया मोडेल परिवर्तन भएको छ। धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो मिडिया स्रोतहरूको विस्तृत दायराबाट प्राप्त गर्छन्, तर तिनीहरूले एक वा दुईको लागि मात्र तिर्छन्। र यदि तपाईं सूचीको शीर्षमा हुनुहुन्न भने, तपाईंले भुक्तान गर्नुहुन्न। यो तपाईको सामग्री योग्य वा रोचक वा सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने कुरा होइन। यो वालेट समस्या को एक हिस्सा हो। त्यहाँ वरिपरि जान पर्याप्त छैन।
वास्तवमा, डेटाले पुष्टि गर्छ कि मानिसहरू सामग्रीको लागि भुक्तान गर्न चाहँदैनन्।
Gen Z र Millennials को एक पूर्ण रूपमा 75% पहिले नै तिनीहरू भन्छन् डिजिटल सामग्रीको लागि भुक्तान नगर्नुहोस्-उनीहरूले यसलाई नि:शुल्क स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्छन् वा होइनन्। यदि तपाईं paywall संग प्रकाशक हुनुहुन्छ भने, त्यो डरलाग्दो समाचार हुनुपर्छ।
२०२१ डिजिटल प्रकाशन उपभोक्ता सर्वेक्षण
वास्तवमा, कसैले तर्क गर्न सक्छ कि paywals प्रेस स्वतन्त्रताको लागि एक शाब्दिक बाधा हो जुन हामी सबैलाई यस देशमा धेरै प्रिय छ। उपभोक्ताहरूलाई सामग्रीको लागि भुक्तान गर्न बाध्य पारेर, यसले समाचार र जानकारी पहुँच गर्न भुक्तान गर्न नसक्ने वा नदिनेहरूलाई निषेध गर्दछ। र यसले सम्पूर्ण मिडिया मूल्य शृङ्खला-प्रकाशक, पत्रकार, विज्ञापनदाता र जनतालाई नकारात्मक असर गर्छ।
के भयो भने, हाम्रो डिजिटल मिडिया विकासमा, हामीले केहि नयाँ, जस्तै paywalls, के साथ आउनु पर्दैन? हाम्रा स्थानीय टिभी समाचार स्टेशनहरूमा यो सबै ठीक छ भने के हुन्छ? सामग्रीको सिर्जना र वितरणलाई समर्थन गर्न केही विज्ञापनहरू मात्र चलाउनुहोस्।
तपाईलाई लाग्न सक्छ कि यो धेरै सरल छ। कि तपाइँ केवल ब्यानर वा नेटिभ विज्ञापनहरू अनलाइनको साथ डिजिटल प्रकाशनलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्न। त्यो सामाजिक र खोजले यति धेरै उपलब्ध विज्ञापन खर्चहरू चूसिरहेको छ, स्वतन्त्र प्रकाशकहरूको लागि पर्याप्त बाँकी छैन।
त्यसोभए, राम्रो विकल्प के हो? मुद्रीकरण संलग्नता च्यानलहरू तपाईं नियन्त्रण, जस्तै इमेल, पुश सूचनाहरू र प्रत्यक्ष सन्देशका अन्य रूपहरू। गैर-भुक्तानी इमेल र पुश सदस्यताहरू प्रस्ताव गरेर, र भित्र ब्रान्ड विज्ञापनहरू भएकाहरूलाई मुद्रीकरण गरेर, प्रकाशकहरूले नयाँ राजस्व चलाउने क्रममा आफ्ना दर्शकहरूलाई व्यस्त राख्न सक्छन्।
शुभ समाचार भनेको डेटाले देखाउँछ कि उपभोक्ताहरू यस प्रकारको मुद्रीकरणको लागि खुला छन्।
3 मध्ये लगभग4ले बरु विज्ञापनहरू हेर्न र सामग्री नि:शुल्क प्राप्त गर्ने बताउँछन्। र चिन्तित प्रकाशकहरूका लागि तिनीहरूका सदस्यहरू इमेल वा पुशमा विज्ञापनहरूबाट अपमानित हुनेछन्, डेटाले ठीक उल्टो देखाउँछ: लगभग 2/3 ले उनीहरूलाई कुनै पनि चिन्ता छैन वा विज्ञापनहरू पनि याद गर्दैनन्।
अझ राम्रो, अधिकांश डिजिटल उपभोक्ताहरू भन्छन् कि तिनीहरू प्रकाशकहरूको वेबसाइटहरूमा विज्ञापनहरूमा संलग्न छन्। केही 65% Gen Z र 75% Millennials ले प्रेषकलाई विश्वास गरेमा उनीहरूले इमेल न्यूजलेटरहरूमा विज्ञापनहरूमा क्लिक गर्ने बताउँछन्, र Gen Z को 53% र Millennials को 60% पुश सूचनाहरूमा विज्ञापनहरूको लागि खुला छन्-जबसम्म तिनीहरू निजीकृत छन्।
आफ्नो मुद्रीकरण विस्तार गर्न र राजस्व बढाउन खोजिरहेका प्रकाशकहरूका लागि, 1:1 सम्बन्धहरू निर्माण गर्न र तिनीहरूले नियन्त्रण गर्ने च्यानलहरूमा व्यक्तिगत सामग्री डेलिभर गर्नु भनेको paywall भन्दा धेरै राम्रो लगानी र अझ प्रभावकारी हो।
उपभोक्ताहरू तपाईंको सामग्री प्राप्त गर्न चाहन्छन्। र तिनीहरू नि: शुल्क प्राप्त गर्न विज्ञापनहरू हेर्नको रूपमा मूल्य तिर्न इच्छुक छन्। इमेल न्यूजलेटरहरू र पुश सूचनाहरू जस्ता माध्यमहरू प्रयोग गरेर एक बलियो मुद्रीकरण रणनीति लागू गरेर, तपाईंले तिनीहरूलाई कुनै पनि अनावश्यक अवरोधहरू बिना उनीहरूले चाहेको कुरा दिन सक्नुहुन्छ।
२०२१ डिजिटल प्रकाशन उपभोक्ता सर्वेक्षण डाउनलोड गर्नुहोस्
टैग: 2021विज्ञापनसामग्री मुद्रीकरणडिजिटल प्रकाशनडिजिटल प्रकाशन उपभोक्ता सर्वेक्षणईमेल न्यूजलेटरहरूजेनेरेसन zसहजमुद्रीकरणमुद्रीकरण रणनीतिमुद्रीकरण गर्नुहोस्सामग्री मुद्रीकरणप्रकाशनसूचनाहरू धक्का दिनुहोस्